လုပ်ငန်းအီးမေးလ်ရေးတဲ့အခါ အသုံးဝင်စေမယ့် နည်းလမ်း ၃၇ ခု - The Academy of Business Training
ဘယ်လောက်ပဲ သေးငယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါစေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်က အချိန်ပေးပြီး ကိုယ့်ကိုကူညီတဲ့အခါမျိုးမှာ အီးမေးလ်ရဲ့အဆုံးမှာ ကျေးဇူးတင်စကားပြောတာက ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာကျပါတယ်။
၂။ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းစီက စာလုံးတစ်လုံးကို ဖယ်ထုတ်ပါ။
စာရေးရခြင်းအကြောင်းက ကိုယ်ပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာကို စာလက်ခံသူဆီရောက်ဖို့ပါ။ ဒါကြောင့် အီးမေးလ်တစ်စောင် ရေးပြီးပြီဆိုရင် အဲဒီထဲက မလိုအပ်တဲ့ စာလုံးတစ်လုံးကို ဖယ်ထုတ်ပါ။
၃။ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်စီက စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကို ဖယ်ထုတ်ပါ။
အီးမေးလ်ကို သုံး၊ လေးပိုဒ်လောက်ထိ ရေးနေမိပြီဆိုရင် အဲဒါက တကယ်ရောလိုအပ်သလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးကြည့်ပါ။ မလိုဘူးလို့ယူဆရင် ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ စာကြောင်းက တိုတိုနဲ့ထိမိလေ၊ ပိုကောင်းလေပါ။
ကိစ္စတစ်စုံတရာနဲ့ပတ်သက်လို့ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက် နီးလာကြောင်း Client ဆီ အီးမေးလ်ပို့တဲ့အခါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးမထိခိုက်ရအောင် စကားလုံးအသုံးအနှုန်း ချိုသာရပါမယ်။
၅။ စိတ်ရှုပ်နေချိန် အကြောင်းမပြန်ပါနဲ့။
စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုခုရှိနေချိန်မှာ အီးမေးလ်ရေးပို့ခဲ့မိတဲ့အတွက် နောင်တစ်ချိန်မှာ နောင်တရကောင်း ရနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ရှုပ်နေချိန်မှာ အီးမေးလ်မပို့ပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်တိုစရာအကြောင်းကိစ္စက ပိုကြီးလေ၊ အီးမေးလ်ပို့ဖို့ စောင့်ရမယ့်အချိန် ပိုယူရလေဖြစ်ပါတယ်။
၆။ အရေးကြီးတဲ့အီးမေးလ်ဆိုရင် ပြန်စစ်ဆေးစေပါ။
အရေးကြီးတဲ့ အီးမေးလ်ရေးပြီးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ဝေဖန်နိုင်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးဦးကို ပေးဖတ်ပြီး ပြန်လည်စစ်ဆေးစေပါ။ အဲဒါက အမှန်တကယ်အကျိုးရှိပါတယ်။
၇။ CC ထည့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂရုပြုပါ။
CC ထဲမှာ ထည့်ထားသူဆိုတာ တစ်ခါတရံမှာ သူတို့က အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို မသိဘဲ CC မှာ ဖြုတ်ခဲ့ရင် တခြားသူကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှပြောမဆိုဘဲ CC ထဲကနေ လူတွေကို တမင်တကာ မဖြုတ်ပစ်ပါနဲ့။
၈။ CC ထည့်တာကို စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးနည်းအနေနဲ့ သုံးပါ။
ဆိုလိုတာက ကိုယ်အဓိကဆက်သွယ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆီက အကြောင်းပြန်စာမရတဲ့အချိန်မှာ CC ထည့်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးဆီကနေ အကြောင်းပြန်စာရရှိနိုင်တာကြောင့် အသုံးဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
၉။ ”အီးမေးလ်က ပို့သင့်ရဲ့လား” ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ပါ။
အကြံပြုခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ တိုင်တန်းခြင်း၊ တောင်းဆိုခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းစတဲ့ ဘယ်လိုအီးမေးလ်မှာမဆို ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်ကို မေ့နေတတ်ပါတယ်။ အီးမေးလ်ပို့လိုက်တာကြောင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိစေမလဲဆိုတာမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ အီးမေးလ်ပို့ရမယ့် အကြောင်းအရာက မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးဖို့သင့်တဲ့အရာမျိုးဆိုရင် လူချင်းတွေ့မှသာ ပြောပါ။
၁၀။ အတုံ့အလှည့်သဘောကို နားလည်ပါ။
ကိုယ်က အီးမေးလ်များများပို့ရင် များများလက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အီးမေးလ် Inbox ထဲမှာ အီးမေးလ်စောင်ရေနည်းချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း နည်းနည်းပဲပို့ပါ။
၁၁။ Unsend/ Undo Function အသုံးပြုပါ။
Gmail ထဲက Unsend/Undo Function က တကယ့် အသက်ကယ် Function တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀ စက္ကန့် ကနေ ၁ မိနစ်အထိ Interval ကို သတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီး အဲဒီအချိန်အတောအတွင်း အီးမေးလ်ပို့ပြီးမှ တစ်ခုခုမှားခဲ့ရင် Undo ကိုနှိပ်ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက အပေါ်ယံဆန်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့စာအရေးအသားနဲ့ စာလုံးပေါင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတွေက ဝေဖန်ကြမှာပါ။ အမှားတွေ အများကြီးမပါအောင် ကြိုးစားပါ။
၁၃။ ‘ဦးစားပေး’ အဆင့်သတ်မှတ်ပါ။
တချို့အီးမေးလ်တွေက သိပ်အရေးတကြီးမဟုတ်ဘူး။ အချိန်ယူလို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အီးမေးလ်တွေကို ပြထားတာမျိုးလို စနစ်တစ်ခုလုပ်ထားပါ။
၁၄။ အကြံပြုချက်က အပြုသဘောဆောင်ပါစေ။
အကြံပြုချက်ပေးပို့တဲ့အခါ မကောင်းမြင်တဲ့အပြောတွေထက် ကျေးဇူးတင်၊ ချီးမွမ်းတာတွေကို များများရေးပါ။ ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ အကြံပြုစာ Box ထဲမှာ ကောင်းတာလေးတွေ ပြည့်နေမှာပါ။
၁၅။ ကိုယ့်ရဲ့အီးမေးလ်ထဲမှာ မေးခွန်းတွေရှိနိုင်သလား။
ရှိနိုင်ပါတယ်။ လူနှစ်ယောက်အပြင်မှာတွေ့ပြီး စကားပြောဆိုဆက်ဆံကြတာနဲ့စာရင် အီးမေးလ်ပေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြရတဲ့အခါ အထူးသဖြင့် ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ အီးမေးလ်ပို့ပြီး ဆက်သွယ်ရတဲ့အခါ ပြောစရာမရှိ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုတွေ မယူဆပါနဲ့။ အီးမေးလ်ကနေလည်း မေးခွန်းတွေမေးပြီး ရင်းနှီးမှုရယူနိုင်ပါတယ်။
၁၆။ လူချင်းတွေ့မလား၊ အီးမေးလ်နဲ့လား။
အိတ်သွန်ဖာမှောက် ပြောရတော့မယ့်ကိစ္စဆိုရင် အီးမေးလ်ကတစ်ဆင့်ပြောတာက ပိုပြီးထိရောက်မယ်လို့ ကိုယ်တကယ်ထင်ရဲ့လား။ စကားပြောရတာ အခက်အခဲတွေ မရှိရအောင် နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုတင်ဆက်သွယ်မလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးပါ။
၁၇။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတစ်ပါးစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီပူပန်မှုတွေ ရှိနေကြပြီးသားပါ။ ဘာကြောင့် ပိုဆိုးအောင်လုပ်မှာလဲ။ လူတွေက သူတို့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတာတွေထက် ကိုယ်က သူတို့ကိုဘယ်လိုခံစားရစေလဲဆိုတာကို ပိုပြီးမှတ်မိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၈။ အရောင်လေးတွေ သုံးပါ။ Space ခြားသင့်တဲ့နေရာမှာ ခြားပါ။
အီးမေးလ်ပို့တဲ့အခါ စာကအရှည်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှစာပိုဒ်တွေချည်း သက်သက်မဖတ်ချင်ကြပါဘူး။ အချက်ကလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြတာ၊ အရောင်လေးတွေနဲ့ ဖတ်လို့လွယ်ကူအောင် ဖော်ပြပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ”ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ အီးမေးလ်ပို့လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုအကြောင်းပြန်ရင် ကောင်းမလဲဆိုပြီး ထိုင်စဉ်းစားနေမိတတ်ကြပါတယ်။ စကားဆက်က ဘယ်မှာအဆုံးသတ်သွားလဲဆိုတာကို သိပါ။ ဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့စကားကို ပြန်ဆက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။
၂၀။ အီးမေးလ်ပို့မယ့်အကြောင်းရင်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးပါ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်က တစ်ခုခုကို တောင်းဆိုချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ စကားကလိုရင်းမရောက်ဘူး။ ကိုယ်က တိုက်ရိုက်မပြောချင်ဘဲ တစ်ဖက်လူ နားလည်သွားတာမျိုးကို မျှော်လင့်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ကိုယ်သေချာသိထားမှ သူများနားလည်အောင်ပြန်ပြောနိုင်မှာပါ။
၂၁။ Inbox ရှင်းတာနဲ့ တစ်နေမကုန်ပါစေနဲ့။
”ဒီနေ့တစ်နေကုန် Inbox ကို ထိုင်ရှင်းမယ်” ဆိုတာက နည်းဗျူဟာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုပေးထားတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေမှာလည်း Inbox ကို နေ့စဉ်ရှင်းရမယ်လို့ ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ Inbox ရှင်းနေတာနဲ့ တစ်နေကုန်တာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
၂၂။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာ အီးမေးလ်မပို့ပါနဲ့။
အရေးပေါ်ကိစ္စဆိုရင် ဖုန်းဆက်သင့်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်တွေမှာ ဘယ်သူမှအီးမေးလ်ကို မဖတ်ချင်ကြပါဘူး။
၂၃။ အိပ်ခါနီးအချိန်မှာ အီးမေးလ်ဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့။
Notification တွေကို ပိတ်ထားပါ။ မဟုတ်ရင် ဝင်လာတဲ့အီးမေးလ်တွေကို ဖတ်ကြည့်မိပြီး အီးမေးလ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေကို လျှောက်တွေးမိပြီး အိပ်မပျော်ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၂၄။ အကြောင်းပြန်စာကို အရှည်ကြီးပြန်မပို့နိုင်သေးရင်တောင် စာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းပြပါ။
အီးမေးလ်ကို အကြောင်းပြန်ဖို့ အချိန်ယူမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး တစ်ဖက်ကို ဘာမှအကြောင်းမပြန်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ပို့လိုက်တဲ့စာကို ရရှိကြောင်း၊ ဘယ်နေ့မှာ အကြောင်းပြန်ပေးမယ့်အကြောင်း စာတိုလေးပို့တာက တစ်ဖက်က ပို့သူကိုလေးစားရာရောက်ပြီး စိတ်သက်သာရာရစေမှာပါ။
၂၅။ စကားပြောနေရင်း အီးမေးလ်မဖတ်ပါနဲ့။
အလုပ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်တဲ့အခါ ဦးနှောက်က အာရုံစိုက်မှုအားနည်းသွားတတ်ပါတယ်။ စကားပြောရင်း အီးမေးလ်တွေဖတ်တဲ့အခါ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ အီးမေးလ်တွေ ရောထွေးသွားစေနိုင်ပြီး လူမှားပို့တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၂၆။ အီးမေးလ်ကိုအခြေခံပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို မဝေဖန်ပါနဲ့။
ကိုယ်နဲ့ အီးမေးလ်ဆက်သွယ်နေတဲ့သူနဲ့က သိကျွမ်းတာ မကြာသေးဘူး၊ တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ပြောစကားတွေ၊ ဟာသတွေကို နားမလည်သေးဘူးဆိုရင် သူက ဘယ်လိုလူဆိုတာကို ကောက်ချက်ချမစောလိုက်ပါနဲ့။
၂၇။ စာချုပ်ကိစ္စတွေကို အီးမေးလ်က ဆွေးနွေးတာက လူချင်းတွေ့တာထက် ပိုလွယ်ကူပါတယ်။
စာချုပ်ကိစ္စတွေ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားမှုတွေ ဘေးဖယ်ပြီး အချက်အလက်တွေ၊ ဦးစားပေးစနစ်တွေနဲ့ ပြောဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အီးမေးလ်ကတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်တာက ပိုလွယ်ကူစေပါတယ်။
၂၈။ လစဉ်တိုင်း ကိုယ်မဖတ်တဲ့ Subscription တွေရှင်းပါ။
Subscribe လုပ်ထားပြီး ကိုယ်မဖတ်ဖြစ်တဲ့စာတွေကို ဖျက်ပစ်ပါ။
၂၉။ တစ်ပတ်ကို တစ်ရက်လောက် အီးမေးလ်မစစ်ဘဲနေပါ။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဲဒီရက်မှာ အီးမေးလ်ဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့။ ပန်းခြံထဲ လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ပါ။ မိသားစုကို အချိန်ပေးပါ။ အီးမေးလ်အတွက် အချိန်များများပေးလေ၊ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်ချိန် လျော့နည်းလေဖြစ်ပါတယ်။
၃၀။ အီးမေးလ် Tab ကို ဖွင့်မထားပါနဲ့။
Browser ထဲက အီးမေးလ် Tab ကို မလိုအပ်ဘဲ ဖွင့်မထားပါနဲ့။ ကိုယ့်မှာ တခြားလုပ်စရာတွေရှိနေရင် အီးမေးလ်ကို မကြည့်မိအောင် ပိတ်ထားလိုက်ပါ။
၃၁။ စာလုံးမည်းတာ၊ စောင်းတာ၊ မျဉ်းသားတာတွေကို တအားမသုံးပါနဲ့။
အရေးကြီးတယ်ဆိုရင် အရေးကြီးကြောင်းပြောပါ။ စာလုံးမည်းတာ၊ စောင်းတာကို ခေါင်းစဉ်တွေကို ဖော်ပြရာမှာပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။
၃၂။ လူချင်းတွေ့မေးပါ၊ ဖုန်းခေါ်ပါ။
အီးမေးလ်နဲ့ရေးတဲ့အခါ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အတိုင်း တိတိကျကျဖော်ပြနိုင်အောင် စကားလုံးအသုံးအနှုန်း သေချာရွေးချယ်နေရတတ်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ပြောလို့ အဆင်ပြေမယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုရင် အီးမေးလ်ကို တအားမမှီခိုပါနဲ့။
၃၃။ စကားလုံးကြီးကြီးတွေ မသုံးပါနဲ့။
ရာထူးကြီး၊ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ယုံကြည်မှုမရှိသလိုခံစားမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာထူးမြင့်လေလေ၊ သူတို့သုံးတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းက ရိုးရှင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က လိုရင်းကိုပဲပြောတယ်၊ စကားကို ဖွဲ့နွဲ့မနေပါဘူး။
၃၄။ ကိုယ့်အီးမေးလ်လက်ခံမယ့်သူကို သိပါ။
ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးလ်ကို လက်ခံသူဖက်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းပြီး လက်ခံသူကို နားလည်အောင်၊ အတွေးပေါက်အောင် ရည်ရွယ်ပြီးရေးပါ။
၃၅။ Smiley သင်္ကေတတွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အီးမေးလ်လက်ခံသူအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာက အဲဒီလိုသင်္ကေတသုံးတာကို သိပ်ဂရုမစိုက်တော့ပါဘူး။ ရံဖန်ရံခါမှပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။
၃၆။ နှုတ်ဆက်စကားဆိုတဲ့အခါ အာမေဋိတ်သင်္ကေတ (!) မသုံးပါနဲ့။
အီးမေးလ်စစချင်းမှာ Hi ၊ Hey စသဖြင့် နှုတ်ဆက်စကားဆိုတဲ့အခါ Hi! ၊ Hey! ဆိုပြီး ”!” မသုံးသင့်ပါ။ အာမေဋိတ်သင်္ကေတက ကိုယ့်စကားကို အလေးအနက်မဟုတ်သလိုဖြစ်သွားစေပါတယ်။
၃၇။ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမထားဘဲ အီးမေးလ်ကနေ အသုံးဝင်တဲ့အရာလေးတွေ ဝေမျှပါ။
အသုံးဝင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အီးမေးလ်က ဝေမျှပါ။ အဲဒီအတွက် အကြောင်းပြန်စာတစ်စုံတစ်ရာရဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။